ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပွဲ-၂၀၁၈၊ စင်္ကာပူတွင် FBS ပါဝင်ခဲ့ပါသည်
သြဂုတ် ၂၅ နှင့် ၂၆တွင် FBSမှ စင်္ကာပူရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပွဲ-၂၀၂၈တွင် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ FBS CEO, COO နှင့် ပါတနာများ ပြပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ပွဲလာပရိတ်သတ်များနှင့်အတူ FBS အကျိုးအမြတ်၊ Forex နှင့် အရောင်းအဝယ်အကြောင်း အသုံးဝင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ မျှဝေခြင်းဖြင့် အချိန်ကောင်းရရှိခဲ့ကြပါသည်။ အမှတ်တရလက်ဆောင်များနှင့် ဓာတ်ပုံကိုလဲ မမေ့ပါနဲ့!
ဧည့်သည်တော်များသည် CFD၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး အရောင်းအဝယ်၊ ပရိုမိုးရှင်းများနှင့် စပ်တူလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များကို အလွန်စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသည်။ FBS သုံးသပ်သူများကဏ္ဍ နှင့် FBS CopyTrade တို့သည် တင်ဆက်ပြသမှု၏ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြသည်: ကျွန်တော်တို့၏ ရောင်းဝယ်သူများ - လူသစ်များနှင့် ကျွမ်းကျင်သူများ နှစ်ဦးစလုံးကို ပေးနေသည့် အလားအလာနှင့် အကျိုးအမြတ်များကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည့်အတွက် လူတော်တော်များများ FBS မှာ ပါဝင်လာခဲ့ကြသည်။ FBS CopyTradeသည် လူတိုင်းစောင့်မျှော်နေသည့် လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပြီး၊ ကျွန်တော်တို့ ဖောက်သည်များကို ခုလိုပံ့ပိုးပေးရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာမိပါတယ်!
FBSသည် ရောင်းဝယ်သူနှင့် ပါတနာအသစ်များကို ၎င်း၏ နိုင်ငံတကာမိသားစုထံသို့ ဝမ်းမြောက်စွာ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ စင်္ကာပူ၊ ထပ်တွေ့ရအောင်!